Xildhibaan Muxumed Jaamac Bullaale Ayaa Musuqmaasuq Ku Eedeyay Duqa Degmada Oodweyne & Ku Xigeenkiisa | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Xildhibaan Muxumed Jaamac Bullaale Ayaa Musuqmaasuq Ku Eedeyay Duqa Degmada Oodweyne & Ku Xigeenkiisa
March 19, 2017 | Published by: daar
Oodwene(OWN) Xildhibaan Muxumed Jaamac Bullaale oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Oodweyne ayaa musuqmaasuq ku eedeyay duqa degmada Oodweyne & ku xigeenkiisa. Musuqmaasuqaas oo ah in ay lunsadeen kaadhadh ay HAAYADDA WFP ugu talagashay in raashin loogu qaybiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada Gobolka Daadmadheedh. Haddaba qoraal uu xildhibaanku caawa soo gaaadhsiiyay shabakadda caalamiga ah ee Oodweynennews xafiiska ay ku leedahay magaalada Oodweyne ayaa u dhignaa sida tan:
“Waxaad ogtihiin ma idiin sheegaa ayaa la yidhi. Daadmadheedh waxa uu ku jiraa wakhti abaareed oo haraad iyo diihaal darteed ayay xooluhu u le’deen. Geed sare iyo mid hoose toonna ma qoyana, abaartiibaa daba dheeraatay, berkedihii baa madhay, dhulkaa omos dartii dildilaacay, xoolihii baa xaab ka waayey, adhigii baa bakhbakhtiyay , geeliibaa tamootiyay, abaar baa dhacday, dhulkiiba xaaluf noqday, habaas iyo boodh ayaa daris lala noqday, baraagihii iyo balliyadiibaa la dhoobo qaaday, biyo-dhaamis baa lagu jiraa, weyso iyo wax la cabaa xitaa waa suququul, salaadda lama wayseysto ee waa la gabageystaa. Xoolihiibaa xoolo cunay, xoolihii baa dad cunay, dadkiibaa badh waashay intii kalana wax ba kama sokeeyaan.
Haddaba iyada oo xaalku sidaa yahay ayaa waxa Gobolka ka jira arrimo laga yaqyaqsadoo oo ay ku kaceen masuuliyintii deegaanka ugu sarreeyay. Arrimaahaas oo ah musuqmaasuq ay ku kaceen Maayarka Degmada Oodweyne, ku xigeenkiisa iyo masuul kale oo arrinkan kula shuraakoobay. Iyaga oo u tashaday sidii ay u mijaxaabin lahaayeen raashinkii yaraa ee Haayadda WFP ay ugu tala gashay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan tuulayaasha gobolka ku hareereysan.
Maayarka iyo kuxigeenkiisu iyaga oo kaashana masuuliyintaas kale ee la shuraakada ah waxa ay maroorsadeen badi kaaadhadhkii lagu qaadanayay raashinka iyaga oo kaadhadhkii badhna meel dhigtay, badhna iibiyay, badhna siiyay dad gaar ah oo ay dano gaar ah ka leeyihiin. Kaadh walba oo ay qof siiyeenna badh ahaan ayay leeyihiin. Waxa kale oo jirta tuulooyinkii raashinka loo qaybin lahaa ay iyagu ka duween sidoo kalena ay qorteen tuulooyin gaar ah oo ay iyagu haydhmaano ka yihiin kuna magacaabeen in meel la deggan tahay.
Haddaba anigoo aan indhaha ka qarsan kareyn musuqaa baahsan ee lagula kacayo dadkii aanu madaxda u ahayn, waxa aan halkan farriin uga dirayaa haayadaha dawladda dabagalka masuqmaasuqa in ay arrinta dabagaalaan oo waxna ay ka qabtaan. Sidoo kale waxaan halkan iyana farriin uga dirayaa Haayadda WFP xafiiskeeda Hargeysa in ay arrintan wax ka qabtaan odhod dabagala na ay u soo diraan deegaannada ay ka socoto hawsha raashin qaybintu arrinkan ay uyagu gacantooda ku maamulaan kana saaraan gamcaha kale ee lunsaday raashiinkii masaakiinta loo qaybin lahaa.
Ugu danbeyn haddii aanay Wfp arrinkan wax ka qaban iyaga ayay magacooda sumcad xumo soo gaadhi doonta.”
Xildhibaan Muxumed Jaamac Bullaale